Nelsan Mandeellaa Itoophiyaa keessa torbee lamaaf turan - BBC News Afaan Oromoo
Yeroonsaa bara 1962 ture koloneel Fiqaaduu Waqkenneen nama Afrikaa Kibbaa irraa dhufe tokkoof leenjii kennaa turan.
Sagalee otoo hin dhageessisiin naannoo diinaa seenaanii fanjii awwaaluun qaama leenjichaa ture.
Namichi isaan leenjisan ajajaa olaanaa garee riphee lolaa Afrikaa Kibbaa 'Umkoonto wee siizwee'' jedhamuuti.
Gareen kun buufatawwan tajaajila elektiriikii keennan haleelee, bulchiinsi appaartaayidii yeroosiis nama garee kana ajaju kana barbaaduutti ka'e.
Namichi hin dhageenye hin argine jedhee Itoophiyaa gale. Dabalataanis biyyoota Afrikaa keessa naannahuun garee lolaa isaaniif gargaarsa walitti qabuu maayii koo jedhee qabate.
Neelsan Roolihilaalah Maandeellaan dhimmi Itoophiyaa isaan fide leenjii loltummaatiin of ijaaruu ture.
Maandeellaan nama jabaafi homtuu kan mogolee isaan hin buusne turan. Ajaja immoo haalaan eegu jedhu Koloneel Fiqaaduun.
"Nama jaalatamoos turan," jedhu gaaffiif deebii waggoota muraasa dura BBC waliin taasisaniin.
Koloneel Fiqaaduun yeroos miseensa humna addaa kora bittineessaa Kolfee turan.
"Namni Afrikaa Kibbaa gammadaafi barumsaaf qophii tahe as yeroo dhufu nan yaadadha, kanarra immoo lasoofi obsa qabu ture" jechuun waa'ee isaa dubbatu.
Image copyright Fekadu Wakene
Nama jabaa fi obsa qabeessa turan
Fiqaaduu Waakennee, leenjisaa Maandellaa
Hinkoon koloneel Fiqaaduu Maandeellaaf akkatti fanjii dhukaasan, balaa tasa akkatti qaqqabsiisaniifi leenjii loltummaa biiroollee kennuu ture.
"Qaama jabaa tahe qabu, inumaayyuu yeroo tokko tokko waan humna isaanii ol tahe yeroo dalagan nan argaan ture. Akka of eeggatanis ittan himan ture. Gaaf gaaf immoo nan isaan dhorka ture," jedhu.
Ajajaa koloneel Fiqaaduu kan turan jeneraal Taaddasa Birruutu dirqama Maandeellaa leenjisuu kan koloneelichaaf kenne.
Koloneelichi gara duraa amalli Neelsan Maandellaa isaaniif galu hin dandeenye ture.
Itoophiyaa turuun isaanii icciitii ture...
'' Namni tokko Afrikaa Kibbaatii akka dhufeefi yeroo muraasa nu faana akka turu qofan beeka ture. Waanti hundi icciitii ture, eenyuyyuu akka baru hin barbaadamne ture.'' jedhu koloneelichi.
Mootiiin yeroosii Haayilessilaaseen ardiin Afrikaa kolonii jalaa akka baatuuf waan fedhii qabaniif Maandellaan gara Itoophiyaa akka dhufan hayyaman.
Yeroosaatti immoo Itoophiyaan humna loltuu jabaa qabdi ture.
Biyyoota Afrikaa waraana keessa jiran tasgabeessuutiinillee kan akka ishee hin jiru ture.
Mootichi "Biyyooti Afrikaa bilisummaaf qabasaa'an obboloonni Afrikaa marti dhufanii leenjii loltummaa fudhachuu danda'u" jechuun ifatii labsanii turan.
Leenjiiwwan kan akka meeshaa waraanaa hidhachuu, saayinsii loltummaafi waraana hogganuu galmee Maandeellaa keessa jiru ture.
Maandellaan kitaaba isaanii 'Long Walk to Freedom'( Karaa Dheeraa gara Bilisummaa) jechuun moggaasan irratti "Karaa dheeraa lafoo deemuu nan jaaladhan ture, teessumni lafichaa dansaa ture," jechuun barreessaniiru.
"Namootni mana dhoqqeen maragame keessa jiraatan, namootni farsoo mana xiqqoo keessatti naqame yeroo dhugan yoon argu waan Afrikaa Kibbaa na yaadachiisu ture,'' jechuunis barreessanii turan.
Image copyright Mayibuye archives
Goodayyaa suuraa Maandellaan biyyatti yoo deebi'an jeneraal Taaddasa Birruu irraa badhaa meeshaa waraanaa argatanii turan.
Dubbii baayyisa ture
Maandellaan Itoophiyaa jiraachuun isaanii iccitii yoo taheyyuu isaan garuu ijarraa hafuu hin dandeenye ture. Namoota isaan wajjiin leenjii fudhatan irra dheeroofi qaamaan guddaa tahuun isaanii isaan saaxilee ture.
Obbo Tafaayee Abbabaan itti gaafatamaa kutaa muuziqaa fi diraamaa Kolfee Baataliyoon turan.
"Nan yaadadha, dirree mooraa sana keessa fiiganii hin dadhaban ture, ni utaalu, taa'uufi ka'uu hojjetu ture. Gaaf tokko hin dabarsan ture" jechuun Maandellaa yaadatu.
Gaaf tokko Maandellaan leenjisaa isaanii waliin mana nyaataa keessatti otoo nyaata nyaatanii obbo Tasfaayee waliin wal argan.
Afriikaan Kibbaa alaabaa bara appaartaayidii haquuf
"Nageenya isaaniif waan sodaatamuuf isaanitti siiqanii haasa'uun waan hin yaadamu ture," jedhu gaaffiifi deebii waggoota muraasa dura BBC waliin taasisaniin.
Gaafas carraa argatan fayyadamuun Tasfaayee Abbaban Maandellaa waliin haasa'an. Waa'ee appaartaayidii itti odeessan '' Namatti maxxanuufi oduu odeessuu baayyee jaalatau'' jechuun isaan ibsu Tasfaayee Abbabaan.
Maandellaan do'ii ilaalu ture
Do'ii Tasfaayeen garee isaanii waliin tahuun dhiyyeesan irratti argamuu jalqaban Maandellaan.
"Do'ii dhiyeessinuun baayyee bashannanu ture, isaaniif yeroo sirbinu immoo irra caalaa gammadu ture," jedhu.
Maandellaan ji'a jahaaf akka Itoophiyaa turaniif yaadamee ture, paartiin isaanii ANC'n garuu torbee lama booda akka deebi'an murteesse.
Maandellaan gara biyya isaanii yeroo deebi'an jeneraal Taaddasa Birruu irraa badhaasa meeshaa waraanaa baay'ee argataniiru.
Hagayya 5 Bara 1962 seeraan ala biyyaa bahuu sababa jedhuun hidhaman.
Maandellaan biyyaa bahanii ji'a jaha kan dabarsan yoo tahu torbee lama Finfinnee keessa ture kan dabarsan.